Aya ndiwo maitiro Apple akadzivirira zvakavanzika zvesoftware iyi iyi WWDC 2021 | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 10/06/2021 18:00 | Noticias, WWDC 2021
Huru chigadzirwa kudonha uye apuro software ndeimwe yekambani isina kusimba mapoinzi. Kwete Apple chete idambudziko asi kumakambani ese ane zvigadzirwa zvavo pasi pechivande chekudzivirira kubuda kwemarudzi ese. Iyo yakazara vhezheni yeIOS 14 yakaburitswa gore rapfuura iyo yakafumura maficha makuru uye yakazopedzisira yafumurwa kuWWDC. Zvisinei, Gore rino kuWWDC 2021 takasvika neruzivo shoma uye zvishoma zvishoma zvakagadzirwa pamusoro penyaya dzeIOS uye iPadOS 15. Izvi zvinogona kuve nekuda kwesystem nyowani inoshandiswa neApple kudzora kuratidzwa kwemashoko kuburikidza neepamoyo mapindiro.
Aya ndiwo maitiro Apple akadzivirira iOS uye iPadOS 15 yeWWDC 2021
Vakomana nevasikana ve 9to5mac vakaongorora kodhi yekodhi yebeta yekutanga kune vanogadzira iOS 15 senge mune imwe neshanduro yakaburitswa naApple. Nekudaro, ivo vawana quirk iyo yavasati vamboona. Iyo hombe Apple yawedzera chinosarudzika chakasarudzika kuzvinhu zvitsva muIOS uye iPadOS 15. Ndokunge, yega yega chinhu package kana yemunhu maficha akaiswa mepu kune ID iyo inowanikwa kuburikidza neyakaganhurirwa kuwana.
watchOS 8: kuwedzera kushanda uye kukosha kune hutano hwega
Kugona kuratidza izvo zvinorambidzwa mabasa zvakafanira uve neyakavanzika nhoroondo inokwanisa kuvhura ivo. Ndokunge, mamwe mabasa akavhurwa uye achiratidzwa kana iOS yaona kuti chimiro chakashandiswa chiri chaicho. Nenzira iyi, Apple inogona kupa mukana kune zvimwe zvikamu zveIOS uye iPadOS kune vamwe mainjiniya kuvanza mamwe mabasa avasingafanirwe kushanda. Izvi zvinoshanda zvakazvimiririra pamabasa uye zvinodzivirira munhu wese kuwana mukana kune iyo nyowani nyowani yekushandisa sisitimu.
Neimwe nzira, izvi zvatoitika pasi rose neyakagadziridzwa kubva kuApp Store zvichienderana nemhando yeIOS yatinayo uye kuti Apple yasarudza kuvandudza iyo ruzivo. Zvisinei, chimiro chemiganhu chauya kune software kuti igare nechinangwa chekuchengeta nhau dzeanoshanda masisitimu zvakavanzika kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Aya ndiwo maitiro Apple akadzivirira zvakavanzika zvesoftware iyi iyi WWDC 2021